Akhriso: Tirada caruurta ah ee sannadkii 2016-ka ay Ciidamada AMISOM ku dileen Soomaaliya – XOGMAAL.COM
Akhriso: Tirada caruurta ah ee sannadkii 2016-ka ay Ciidamada AMISOM ku dileen Soomaaliya
By admin	 On Oct 10, 2017
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) uu mas’uul ka ahaa dilka 42 carruur ah sanadkii hore.
“Dhibaatooyinka caruurta ee AMISOM ay geysatay waxay asal ahaan ka dhaceen howlgallada looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab ama dabka aan kala sooc lahayn ee ka jawaabaya weerarada.” Ayaa lagu yiri Warbixintan oo la sii daayay Todobaadkan.
Sidoo kale Warbixinta waxaa lagu sheegay Ciidamada Kenya oo dagaal kula jira Al-shabaab in ay masuul ka yihiin dilka 11 caruur ah, halka Howlgalka Mareykanka uu dilay ugu yaraan hal ilmo sanadkii 2016-kii.
Waxaa kaloo warbixinta QM lagu soo hadal qaaday weerarkii 25-kii August ee sanadkan xilli habeen ah Ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa Mareykanka ay ka geysteen degaanka Bariire, halkaasi oo ay ku beegsadeen 10 Qof rayid ah, oo ay ku jiraan caruur.
Ugu dambeyntii QM waxay sheegtay Ciidamada Maraykanka in gudaha Soomaaliya ay ku dileen 510 qof oo Soomaali ah tan iyo 2007-dii iyaga oo adeegsanayay weeraro kala duwan.
Wiil Soomaali ah oo jeclaaday gabadh Hindiyad ah (maxaa xisagay?)
War deg deg ah: Madaxweyne Farmaajo oo war ka soo saaray Shirkii Kismaayo
Ciimadamada xoogga Dalka oo la siiyay amar cusub.
Madaxweyne Maxkamad loo soo taagay wax is daba marin
SAWIRRO:_ Itoobiya oo lagu qabtay hub iyo Waxyaabaha Qarxa
QM oo ka sii digeysa xad gudubyo ka dhaca doorashada 2020 ee Soomaaliya.
QM oo ka sii digeysa xad gudubyo ka dhaca doorashada 2020 ee…
Cabsi laga qabo in mar kale dagaal uu ka qarxo deegaanka…
Guddoonka Golaha Shacabka oo diidan Guddi ku howlan dib u…
DP World CEO: All options open following Djibouti port court…
Ethiopia to charge five over attack at PM Abiy rally – Reuters